Ipensela le-Apple, nansi indlela i-Apple okufanele yenze ngayo izinto | Ngivela kwa-mac
Ipensela le-Apple, nansi indlela i-Apple okufanele yenze ngayo izinto
Namuhla ekuseni ngikutshelile kungani nginqume ukungayithengi i-iPhone 7 entsha, futhi manje ngizokutshela okuthile okuhluke ngokuphelele: kungani nginqume ukuthenga iPensela le-Apple, awu, nokuthi inkampani ihlangene nayo isuse idlelo kimi 😂.
Isikhathi esingaphezudlwana kwesonto eledlule, kwaqondana nokwethulwa kwe-iPhone 7, ngama nge-Apple Premium Reseller eSeville, futhi lapho ngangizama iPensela le-Apple ngicabanga ngokusebenziseka kwayo ekubhaleni (noma ngabe kuhle kangakanani, iseva akanalo ithalente lokudweba). Ngizamile imizuzu embalwa nje ngisebenzisa uhlelo lokusebenza lwamaNothi, ngabhala imigqa embalwa, futhi Bengingadingi enye into ukwazi ukuthi Ipensela le-Apple yilokho ebengikulinde iminyaka.
1 Ipensela le-Apple limele izinga lokusondela ekupheleleni i-Apple okungafanele iphambuke kulo.
1.1 Akukho okuphelele
Ipensela le-Apple limele izinga lokusondela ekupheleleni i-Apple okungafanele iphambuke kulo.
I-iPhone iyithuluzi elihle; Singasho ukuthi iyithuluzi elidingekayo njengoba lucingo futhi lusebenzela ukuxhumana ngezindlela zalo ezahlukahlukene, luhamba nathi njalo. Kungumshini wosuku nosuku futhi ngaphandle kokungabaza, ngaphandle kwe-iPhone 7, kungenye yezimpumelelo ezinkulu ze-Apple lapho zonke, ngokuphelele zonke izinkampani, zikopishe ngandlela thile. Kepha i-iPad kungenye into. Ngokombono wami, I-iPad iyidivayisi enganikela ngamathuba amakhulu emfundweni noma emsebenzini. Ngaphandle kokukwazi ukubuka ama-movie nochungechunge, i-iPad ingaba yithuluzi lomsebenzi, yize ngingeke ngibe nesibindi sokukulinganisa nekhompyutha. Kepha kuze kube sekupheleni konyaka odlule, i-iPad ibikhubazekile.
Lapho i-Apple ikhipha i-iPad Pro engu-12,9-intshi, yenza isinqumo esikhulu. Kepha kwakuseyisinqumo esingcono ukwethula i-9,7-inch iPad Pro ngezinkinga ezisobala zokuphatheka. Kanye ne-iPad Pro kwafika i-Apple Pencil. Yebo, ipeni into uJobs ayehlala eyiphika ngoba kuye kwakuyisithiyo phakathi komuntu nomshini. Kepha ngiyakukholwa lokho Ngisho nemisebenzi izokwazi ukushintsha umqondo wayo, futhi uma ibingabona ukuphelela ongabhala ngakho kwi-iPad ngenxa yePensela le-Apple.
Imikhiqizo ye-Apple ayiphelele. Akukho lutho empilweni, futhi ngeke ngisho ngenye indlela ngoba ngingumlandeli we-Apple futhi ngibhuloga ngomkhiqizo. Futhi ku-Apple Pencil akuyona noma kunjalo, ipeni eliseduzane nokuphelela.
Idizayini yayo yinhle ngendlela eyisimanga, kodwa futhi iyingozi. Ukuzwela kobuso bayo, bushelelezi ngokuphelele, kuyisipho sokuzwa ukuthinta, kepha futhi kuyivumela ukuthi iginqike ngaphezu kokufisayo futhi igcine ilele phansi. Kuzodingeka futhi ukuthi uqaphele nge-cap yakho ephezulu kazibuthe, kepha ngenkathi uyishaja kungenzeka ukuthi ilahleke. Kepha ngaphandle kwalezi zici ezimbili, ngiyagcizelela, i-Apple Pencil isesekeli ebengikade ngilinde iminyaka njengomphelelisi we-iPad.
Su ukuzimela Kwanele ukubuza, kepha ngiyethemba ukuthi kuhlala isikhathi eside ngokwengeziwe. Futhi uma uphelelwa yibhethri, uyifaka ku-iPad imizuzwana engu-15 bese unenye ingxenye yehora ukuqedela obukwenza.
Ukunemba kwawo okumangalisayo kukuhle kunakho konke. Ngeke ngikhulume ngokuthi isebenza kanjani kusici sokudweba, ngoba angidwebi futhi ngeke ngikhulume ngalokho engingakwaziyo, yize imibono yochwepheshe ikubeka esicongweni sokunemba.
Ngokombono wokubhala ngesandla, Ipensela i-Apple iseduze kakhulu engake ngaba nakho ekubhaleni ngesandla ephepheni. Akukho okuphazamisa lapho ubhala futhi, ukonga amabanga asobala, kucishe kufane nokuthatha ipeni nephepha, ngenzuzo yokuthi uzokwenza ukucindezela okuncane, uzokhathala kancane, futhi ngeke umoshe iphepha, into iplanethi ezokubonga ngayo.
Ngizamile amanye ama-styluses yonke indlela eya kwi-Apple Pencil, futhi ngingasho ngokuphepha ukuthi konke engikwenzile ukuchitha imali. Kuyiqiniso ukuthi ukubheja kuka-Apple kubiza u- € 109, kodwa ngiyakuqinisekisa ukuthi ngeke uzisole ngakho. Okubi kuphela ukuthi ukujabulela Ipensela le-Apple bekufanele ngishintshe i-iPad Air 2 yami entsha sha nge-iPad Pro, okunye ukumosha imali. Kepha angizisoli nakancane.
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Apple » Izaziso » Ipensela le-Apple, nansi indlela i-Apple okufanele yenze ngayo izinto
Izinombolo ze-IPhone 7 (ezingekho emthethweni)
IMacOS Sierra 2 beta 10.12.1 yonjiniyela isiyatholakala